Nke a bụ obere ma na-atọ ụtọ post na nsogbu mkpuchi. Ejiri saịtị na ihe nchọgharị iji bulie akụrụngwa. Ha na-eme ya nke ọma oge ụfọdụ na nsonaazụ njedebe na-agbaji weebụsaịtị gị dị ike kama imelite ya oge niile ịchọrọ. Taa, mụ na JW Player na-arụ ọrụ, ihe ọkpụkpọ Flash Movie nke na-adọta na ndepụta nke ihe nkiri site na faịlụ XML. Nsogbu bụ na anyị na-emelite faịlụ ahụ mgbe niile